Sidee Loola Wadaagaa Kooxda Telegram Iyaga oo adeegsanaya URL? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
April 27, 2021 0 comments 484
Isticmaalayaasha barmaamijka Telegram hadda waxay abuuri karaan kooxahooda warbaahineed oo ay la wadaagi karaan kuwa sidaasay rabaan. Kooxaha ku jira arjigan waxay noqdeen aalad aad u fiican oo lagu faafiyo macluumaadka iyo waxyaabaha ku jira si dhakhso leh, fudud oo fudud.
Waad abuuri kartaa tirada kooxaha aad rabto waxaadna go'aansan kartaa cidda xubin ka noqon doontaXitaa waxaad fursad u lahaan doontaa inaad ku martiqaado dad cusub adoo adeegsanaya xiriiriye ay ku bixiso arjiga laftiisa. Nala joog oo soo hel habka ugu fudud ee lagula wadaagi karo koox Telegram adoo adeegsanaya URL.
Sidee qof loogu casuumaa koox Telegram ah?
Runtu waa taas waxaa jira siyaabo badan oo qofka loogu martiqaado kooxdeena faafitaanka, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu fudud uguna toosan waa wadaagista xiriiriye la abuuray isla marka aan furno koox ku jirta dalabka
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah midaas waxaad ku dari kartaa in kabadan 200.000 oo qof koox kasta, sidaa darteed wax dhibaato ah kuma lahaan doontid tirada xubnaha. Haddii aadan wali aqoon sida loo abuuro koox Telegram, raac talaabooyinkan:
Saxaafadda kore saddexda xariijimo ee jiifka ah dhanka bidix
Guji xulashada "Kooxda cusub"
Xullo dadka aad rabto inaad ku darto
Samee magac kooxdaada
Guji "ilaaliye"waana diyaar. Kooxda ayaa la abuuray
Maxaad ubaahantahay inaad wadaagto koox Telegram ah
Waxa ugu horreeya ee la caddeeyo ayaa ah in qof walba uusan wadaagi karin koox Telegram ah. Waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay inaad la kulanto si aad ugu sameyso ficil noocan ah arjiga gudahiisa, oo ay ka mid yihiin xubin ka noqo kooxda ama ka mid noqo mid ka mid ah maamulayaasha.
Waxaad kaliya marinkartaa xiriiriye Haddii aad xubin ka tahay ama maamule ka tahay kooxda, haddii kale macquul maahan in lala wadaago dadka kale.
La wadaag koox xubin ahaan
Mid ka mid ah siyaabaha aad ku wadaagi karto koox Telegram ah adoo adeegsanaya URL wuxuu xubin firfircoon ka yahay kooxda la yiri. Waxaad ku sameyn kartaa sida soo socota:
Gaaritaan codsigaaga mobilkaaga ama kombiyuutarkaaga
Gali kooxda aad rabto inaad la wadaagto
Guji magaca kooxda
Xulashada “Xiriirka casuumada"Waa inaad doorataa ka dibna riix" Nuqul xiriiriyaha "
Hadda waad awoodaa wadaag wadaag kooxda aad rabto.
Waxaad sidoo kale haysataa qaab kale oo aad dadka ugu darto koox adoo xubin ka ah. Fur arjiga, xulo kooxda aad rabto inaad kahesho iskuxirka, dhagsii magaca kooxda, kadib dhagsii saddexda dhibic, xulo "Kudar xubnaha", dooro xiriiriyaha aad rabto inaad kudarto oo guji "Add".
Wadaag koox ahaan maamule ahaan
Waxaad leedahay laba siyaabood oo kala duwan oo aad dadka ugu yeerto koox aad maamule ka tahay. Waad ku samayn kartaa adiga oo si toos ah ugu dara qofka ama adoo adeegsanaya cinwaanka URL:
Gaaritaan kooxda aad rabto inaad la wadaagto
dhagsii saddexda qodob ee taagan
Guji "Maamul koox"
Hadda dooro ikhtiyaarka "Nooca kooxda"
Kaliya waa inaad sameysaa guji xiriirinta kooxda, koobi oo la wadaag cidda aad rabto.
1 Sidee qof loogu casuumaa koox Telegram ah?
2 Maxaad ubaahantahay inaad wadaagto koox Telegram ah
3 La wadaag koox xubin ahaan
4 Wadaag koox ahaan maamule ahaan
Sidee loo helaa daruuraha Telegram?